true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html quiz 3 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
Yiziphi izindlela ezisebenzayo zokuhoxa ezidakamizweni? 2,3
Ukunika umuntu ama-vitamins kanye nama-minerals ngenkathi ewomile kuye kwatholakala ukuthi kubaluleke kakhulu ekuhoxisweni okuyimpumelelo. Esikhundleni sokumenza ukuthi ayeke ukuthatha izidakamizwa, kanye nobuhlungu nengozi yokwehluleka, unikezwa ama-vitamins kanye nama-minerals amaningi.
Uma esetshenziswa kahle, ama-Objective Processes adambisa izimpawu zokuhoxa komuntu, kanye nama-vitamins nama-minerals, kwenza ukuhoxiswa ngempumelelo kube ngukuncipha okuncane.
Vele ume udlule kukhona Thatha ezinye izidakamizwa ukuze usize ngokuhoxisa Sebenzisa ama-vitamins kanye nama-minerals ukusiza ngokuhoxisa Sebenzisa ama-Objective Processes ukwenza ukuhoxiswa kube lula ukudlula kukho ngempumelelo
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Ukusiza Othile Aphume Kwizidakamizwa bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.